बिवाह भन्दा यौ’नका लागि धेरै प्रस्ताव गर्छन्’: रुविना अधिकारी – Everest Pati
काठमाडौं। पछिल्लो समय स्टेज तताउने नृत्य कलाकार तथा मोडल हुन्, रुविना अधिकारी । नेपालगन्ज धम्बुजीचोककी रुविनाले महजोडी लगायतका कलाकारसँग ‘नेपाल टुर’ गरिसकेकी छन् । पाँच सयभन्दा बढी स्टेज कार्यक्रम गरेकी उनले २०७० सालमा ‘बर्दिया बाँसगढी महोत्सवमा नृत्य गरेर कला यात्रा थालेकी हुन् ।
सरिता खनाल र टंक तिमिल्सिनाको ‘तिम्रो मन चोर्नै पर्ने भो…,’बाट मोडलिङ थालेकी उनले अहिलेसम्म ६०भन्दा बढी भिडियो गरिसकेकी छन् । टिका तारामी मगर र चन्द्र शर्माको ‘बाच्छीले धान खायो,’ अनिता चलाउनेको ‘एन्ट्री मार्यो मायाले,’ जय देवकोटाको ‘रुँदो हो मन,’ हरि विष्टको ‘माइतीको देश,’ भागीरथ चलाउनेको ‘जाउँला बरी लै,’जस्ता भिडियोमा उनी देखिइसकेकी छन् । यिनै मोडलसँग राजधानी दैनिकका डब्बु क्षेत्रीले गरेको सटकट संवाद :
कति आउछ एउटा कार्यक्रममा ? मेला महोत्सवमा जाँदा स्टेज कार्यक्रमबाट ३०-३५ हजार पाइन्छ । १० मिनेट नाचेर ३० हजार पाउनु राम्रो कमाइ हो । यो रकम लिन एउटा अफिसरले एक महिना जागिर खानुपर्छ ।
अहिले त को’रोना भा’इरसले स्टेज कार्यक्रम पनि सुक्यो होला है ? यसपालि पुसदेखि फागुनसम्म १७ वटा गरें । फागुन दोस्रो साताबाट को’रोना त्रा’स फै’लिएपछि बाँकी ७ वटा कार्यक्रम रद्द भए ।
मोडलिङ यात्रा कस्तो चल्दै छ ? ठिकै छ । मासिक तीन-चार वटा भिडियो गरिरहेकी छु । पढाइमा पनि व्यस्त भएकाले त्योभन्दा बढीमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । फेरि स्टेज कार्यक्रम पनि भ्याउनै पर्यो ।
शो’षण हुन्छ भन्ने गुनासो छ त ? कस्तो शो-षण भन्ने ? आर्थिक शो-षण हुन्छ । त्यसो त, हरेक फिल्डमा शो-षण हुन्छ । त्यसलाई मान्छेले कसरी हेर्छ भन्ने हो । म अहिलेसम्म त्यस्तो शो-षणमा परेकी छैन ।
आश्वासन त दिन्छन् नि ? त्यो त कुरै नगारौं, मसँग सम्बन्धमा बस । तिमीलाई म राता-रात हिट बनाउँछु, फिल्ममा स्टार बनाउँछु भन्छन् । तर, उनीहरूले विवाह गर्छु भन्दैनन् । यौ-नस’न्धका लागि मात्र प्रस्ताव गर्छन् ।
त्यस्तो बेला के जवाफ हुन्छ ? मबाट त्यस्तो गलत काम हुँदैन भन्छु । किनकि, नियमित म्युजिक भिडियो गर्नेबाट यस्तो प्रस्ताव आउँदैन । नयाँ मान्छेले यस्तो प्रस्ताव राख्ने हुन् । उनीहरूलाई म वास्ता गर्दिन । आफैं टाढा बस्छु ।
कसैको प्रेममा परिएको छ ? थियो । तीन वर्ष प्रेममा रहें । विचार नमिलेर टु-ट्यो । अहिले एकल छु ।
प्रेम त टुट्यो, अब के हुन्छ त ? अब फेरि प्रेममा फसिँदैन । अब पढ्ने, स्टेज कार्यक्रम गर्ने र पाँच वर्षपछि विवाह गर्ने सोचमा छु । विवाह गर्ने सोच बनाएपछि परिवारले पक्कै मागी विवाह गरिदिनुहुन्छ ।
‘म मरेँ भने रुने पनि कोही छैनन्, तर पनि घरिघरि बाच्ने आशा पलाइरहन्छ’